गैँडा मार्ने तस्करलाई उन्मुक्ति : निकुञ्जमा घुँगी टिप्ने चेपाङ मारिए - Tripura Sanchar
साह्रै नरमाइलो खबर, गैंडा मार्नेहरू यो देशमा करोडपति भएका छन्, निकुञ्जभित्र घुँगी टिप्ने विपन्न चेपाङ युवालाई भने सेनाले कुटी–कुटी मारेको छ । चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ मिलनटोलका २४ वर्षीय युवा मारिएको विषयमा चेपाङ समुदाय आन्दोलित छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले पीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव गरेको छ । तर, चेपाङहरू भने परिवारले न्याय नपाएसम्म शव नउठाउने अडानमा छन् ।
अनाहकमा युवा मारिएको विषयमा विरोध गर्न चेपाङ समुदायका अगुवाहरू बिहीबार र शुक्रबार लगातार भरतपुरस्थित सिडिओ कार्यालय आएका थिए । शुक्रबार दिनभर पनि सिडिओसँग वार्ता भयो, असफल वार्ताको विवरण समेटेर मैले काठमाडौं डेस्कमा समाचार पनि फाइल गरिसकेको थिएँ । तर, मृतकका बाबुआमा र श्रीमती जो भरतपुर आउन सकेनन्, सिडिओको अगाडि बोल्न पाएनन्, उनीहरूको आवाज सरकारसम्म कसरी पु¥याउने ? डेस्कको प्रश्न थियो । निर्देशन आएपछि साँझ नै म मोटरसाइकल चढेर चेपाङबस्तीतिर गएँ ।
म चेपाङबस्ती पुग्दा राति ९ बजिसकेको थियो । राजकुमारको घर पुगेँ । रको नाममा वास मात्रै थियो, टिनको छाप्रो । रातिमा को आयो फेरि ? सरकारको मान्छे होला भनेर सुरुमा उनीहरू बोल्न डराए । तर, मैले आफ्नो परिचय दिएर विश्वासमा लिएँ । त्यसपछि उनीहरू बोल्न थाले । बोल्नु के थियो, रुन थाले । यो कुनै दुर्घटना होइन, अत्याचार हो, अत्याचारका विरुद्ध आँसु होइन, आवाज चाहिन्छ, हामी सबै बोल्नुपर्छ भनेपछि आमा आइतीमायाले कथा सुरु गरिन् ।
निकुञ्जका सैनिकको कुटाइले मारिएका २४ वर्षीय राजकुमार प्रजाकी आमा मुख छोपेर रुँदै
राजकुमार परिवारका जेठा छोरा थिए । कान्छा छोरा त उनीहरूले गत वर्ष नै गुमाएका थिए । क्यान्सर भएको थियो उनलाई । बचाउन अनेक कोसिस गरे । ऋण लाग्यो । ‘१२ वर्षको छोरा पनि गयो, घर पनि गयो,’ आमाले भनिन्, ‘ऐलानी जग्गामा घर थियो, चार लाखमा बेच्यौँ । त्यही घरमा भाडामा बस्दै आएका थियौँ, महिनाको दुई हजार भाडा हो । तर, लकडाउनले काम नपाएपछि ६ महिनाको भाडा तिर्न सकेनौँ ।’ त्यसैले उनीहरू अहिले खुला टहरोमा बस्दै आएका छन् । मृतककी श्रीमती रिपुमायाको काखमा डेढ वर्षकी छोरी छन् । उनी टोलाएर बसेकी थिइन् । खासमा सुस्त मनस्थितिकी रहिछिन् ।
‘ऋणले वास बिक्री भयो, लकडाउनले गाँस पनि हरायो,’ बाबु विष्णुलालले भने, ‘भोका जहान परिवारको पेट पाल्न घुँगी खोज्न गएको थियो, तर निकुञ्जमा दख्खल गरेको भनेर सेनाले पिटेर मा¥यो, परिवार भोकै परेको देख्न सकेन, छोराको अपराध त्यही भयो ।’ २४ वर्षीय छोरा गुमाएका विष्णुलाल भर्खर ४२ वर्षका भए ।
‘घटना १ साउनको हो । राजकुमार र साथीहरू घुँगी टिप्न गएका थिए । घुँगी टिपिरहेको वेला दिउँसो १ बजे सेनाले भेटेछ । भेट्ने वेलामा सबैलाई सुतायो रे । पाँचैजनालाई सुताएर हरियो लट्ठीले हिर्कायो । त्यसपछि बुटले पनि हिर्कायो । उचाल्ने–पछार्ने प्राक्टिस गरेछन् । त्यस्तो गरेपछि जीवन बच्दैन नि,’ बाबुले भने, ‘त्यहाँ के भयो भन्ने त हामीले भन्दा पिटाइ खाएर घाइते भएकाले भन्छन् नि ।’
हो, राजकुमारसँगै गएका सन्तोष चेपाङ (सन्तलाल प्रजा) पनि घाइते छन् । घटनाका भुक्तभोगी उनले भने, ‘हामी सातजना गएका थियौँ । दिलमाया चेपाङ, माया राई, पुन चेपाङ, कान्छा चेपाङ, नीरज मगर, राजकुमार चेपाङ र म गएका थियौँ ।’
पछाडिबाट एक्कासि आएका सैनिकले सुरुमै अपशब्द बोलेको उनले बताए । ‘हामीसँग लोग्नेमान्छे मात्र होइन, महिला दिदीबहिनी पनि थिए, तर सेनाले बोल्नै नसक्ने शब्दहरू बोल्न थाल्यो ।’
सैनिक पानीमै पसेर आफूहरूलाई लट्ठी र लात्तले पालैपालो हानेको उनले बताए । ‘पहिले पानीभित्र कुट्यो, घुँगी पानीमा पोखिदियो । फेरि घिसार्दै पाखामा ल्यायो । पाखामा कहिले उत्तानो पारेर, कहिले् घोप्टो पारेर कुटे,’ उनले भने, ‘तिनीहरू जाँड खाएर फिट्टु भएका थिए । मातेर आफँै हिँड्न नसक्ने भएका रहेछन् । तर, हामीलाई भने मुढा बोकाएर हिँडाए । हिँडे पनि बसे पनि कुटिरहे ।’
उनीहरूलाई सेनाले ब्यारेक पु¥यायो । ‘खोलामा र बाटोमा लट्ठी र बुटले कुट्दा ज्यान थिलथिलो भइसकेको थियो । कुट्दै ब्यारेकमा पु¥याए । त्यहाँ त ठूलो मान्छे होला, दया गर्ला, ज्यान बच्ला भन्ने आशा थियो । तर, भित्र पनि मुढा बोकाएर कुद्न लगाए,’ सन्तोषले भने ।
सेनाले पैसा मागेको थियो, तर आफूहरूसँग पैसा नभएकाले भोलि लिएर आउने सर्तमा छाडेको पनि सन्तोषले बताए । ‘एक–एक हजार मागेको थियो, हामीसँग त्यत्रो पैसा छैन, भोलि पाँच–पाँच सय लिएर आउँछौँ भनेपछि छाडिदिएको हो,’ उनले भने ।
५ बजे ब्यारेकबाट छुटेका उनीहरू ६ बजे गाउँ आइपुगेका थिए । सन्तोषले भने, ‘भाइ (राजकुमार) त पातलो मान्छे, कम उमेरको थियो । ऊ बाटोमा हिँड्न नसक्ने भयो । खोलामा पनि हामीले तारेर घर ल्याएका हौँ । रातिदेखि हामी सबै बिरामी भयौँ, तर ऊ सिकिस्त भयो ।’
बाबु विष्णुलालले भने, ‘घरमा बाबुआमालाई नभन्नू भनेको रहेछ । तर, दुखाइ लुकाउन सकेन,’ उनले भने, ‘साँझ त्यस्तै ६ बजेतिर घर आएको थियो, रातभरि सुत्न सकेन । ढाड र तिघ्रामा सुम्लैसुम्ला थियो । बुटले छातीमा र लाठीले पिठ्युँमा हानेका रहेछन्, रातभरि ज्वरो आयो ।’
पिटाइ खाने सबैजना बिरामी भए । त्यसैले अर्को दिन मेडिकलबाट नदुख्ने औषधि ल्याएर खाए । ‘तर, सन्चो होला भनेर आस गर्दा उनको स्वास्थ्य झन्झन् बिग्रियो, तर पछि रगत बान्ता गर्न थाल्यो,’ बाबुले भने ।
सिकिस्त भएपछि राजकुमारलाई ८ गते भरतपुर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ‘अस्पताल ल्याउँदा बाटोमै बोल्न छोडिसकेको थियो । तर, सास छ कि भन्ने आशामा अस्पताल पुु¥यायौँ । तर, डाक्टरले हेर्नासाथ मरिसक्यो भनिदिए,’ सन्तोषले भने, ‘उसको ज्यान गयो, तर बाबुआमा, श्रीमती र डेढ वर्षको बच्चाको बिजोग भयो ।’
छोराको ज्यान किन गयो ? बाबु विष्णुलाल हामीलाई सोध्छन्, ‘ड्यामका ड्याम हिर्कायो रे ! आखिर के अपराध गरेको रहेछ, गैँडा मार्ने डन छन्, घुँगी टिप्दा गरिबका छोराको ज्यान लिने ? बुटले छातीमा हानेर मार्ने ?’ यसको जवाफ मसँग पनि छैन । बरु तपाईंको प्रश्न यो देशको सरकार र समाजसम्म पु¥याउनेछु भनेर म उनीहरूबाट बिदा भएँ ।
राति ११ बजे मोटरसाइकल चढेर भरतपुर फर्कंदा मैले अघि राजकुमारका परिवारसँग गरेको संवादको रेकर्ड मोबाइलमा सुन्दै थिएँ । आमा भन्दै थिइन्, ‘मेरो छोरा मिहिनेती थियो, ब्लक बनाउने काम गथ्र्यो । त्यो दिन म अर्काको खेत गोड्न गएकी थिएँ । बिहान जाँदा सुतेकै थियो । बेलुका त सुत्नै नसक्ने भएर आएछ, तर त्यत्रो गोदाइ खाएर आएपछि उसले बोलेन, दुःख लुकाउन खोजेको थियो ।’
छोरा झन्पछि भन् गल्दै गएपछि लौ न गुहार मागौँ भनेर आफूले भनेको आमा सम्झिन्छिन्, ‘अनाहकमा कुटाइ खायो, ओछ्यानमै दिसापिसाब हुँदा पनि हामी बोल्न सकेनौँ । भो आमा हल्ला नगरौँ, हामीले रोएको कसले सुन्छ र भन्यो । हुन त कसैले हाम्रो सुन्ने भए यस्तो जंगलमा हेलाको जिन्दगी किन हुन्थ्यो र ? त्यही सोचेर हामी पनि पछि हट्यौँ, त्यही हाम्रो भूल भयो ।’
सत्ता, बन्दुक र बर्दीको उन्मादले एउटा निर्धो युवाको ज्यान गयो । त्यत्रो अत्याचार सहेर पनि चेपाङ समुदाय १० दिनसम्म मौन रह्यो । मौनताको यो मूल्य गणतन्त्र नेपालमा चर्को भएन र ?
प्रश्न बिहान तपाईंको हातमा हस्तान्तरण हुने विश्वासमा राति १ बजे यो स्टोरी फाइल गरेको छु ।
निष्पक्ष छानबिन गर : मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चितवनमा चेपाङ समुदायका परिवार र व्यक्तिमाथि भएका दुई फरक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्थापित व्यक्तिहरूको उचित वासको व्यवस्था गर्न तथा मृतक राजकुमार चेपाङको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
‘यस प्रकृतिका कार्यबाट व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको तथा सामाजिक न्याय, आवासको हकलगायतका अधिकारहरूको समेत उल्लंघन हुन गएको देखिन्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको
आन्तरिक छानबिन सुरु : नेपाली सेना
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भएको कुटपिट र एकजनाको मृत्युको विषयमा आन्तरिक छानबिन सुरु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले शुक्रबार घटनामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारी निकायले गर्ने विस्तृत छानबिनमा पनि सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि बसेका सैनिकले नियन्त्रणमा लिई पिटेका एक युवकको बुधबार मृत्यु भएपछि सेनाले आफ्नो धारणा राखेको हो ।
‘घटनाको बारेमा नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा नेपाली सेनाले आफ्नो आन्तरिक छानबिन सुरु गरिसकेको र अधिकार प्राप्त सरकारी निकायहरूले गरिरहेको विस्तृत छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्नेबारे जानकारी गराउँदछौँ । नेपाली सेना नेपाल सरकारको कार्यादेशअनुसार जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले प्रकृति संरक्षण कार्यसम्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ,’ सेनाले भनेको छ ।
तर, यही देशमा सजिलै उम्किन्छन् वन्यजन्तु तस्करीका नाइके
२८ पुस ०६९ मा सातवटा बाघको छाला, सात बोरा हड्डी र एक सय ११ वटा बाघका दाँतसहित नुवाकोटको ककनीबाट दुई युवक पक्राउ परे । रसुवा हुँदै वन्यजन्तुका अंग चीन तस्करी गरिरहेका उनीहरू भरिया मात्र थिए । उनीहरूको गिरोहको नाइके लोडु डिमे भएको थाहा भएपछि प्रहरीले काठमाडौंको बौद्धस्थित उनको घरमा छापा हान्यो । त्यहाँबाट थप आखेटोपहार बरामद भयो । प्रहरीले उनकी श्रीमतीलाई पनि पक्राउ ग¥यो । तर, डिमे पक्राउ परेनन् ।
केही समयपछि डिमे विदेशमा लुकेको पत्ता लाग्यो । पाँच वर्षको प्रयासपछि प्रहरीले ०७४ मा डिमेविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरायो । उनी भारतमा बस्दै आएको थाहा पाएपछि भारतीय प्रहरीसँगको सहकार्यमा २१ फागुन ०७४ मा प्रहरीले डिमेलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्यायो । तर, चार महिनामै उनी सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट सहजै जेलमुक्त भए ।
सुरुमा डिमेलाई जिल्ला वन कार्यालयले उपस्थित नै नभई एक लाख रुपैयाँ मात्र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । पछि पुनरावेदन अदालतले पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । २९ असार ०७५ मा सर्वाेच्चले एक वर्षको कैदबराबर नौ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी लिएर छाड्ने आदेश ग¥यो । त्यसलगत्तै भारत भागेका डिमे अझै नेपाल फर्किएका छैनन् । उनको मुद्दाको फैसला पनि भएको छैन । वन्यजन्तु तस्करीबाटै कमाएको पैसाले उनले भारतमा व्यापार विस्तार गरिरहेका छन् ।
पैसाको बलमा कानुनको पन्जाबाट सहजै उम्कने डिमे एक्ला अपराधी होइनन् । नेपालमा वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न गिरोहका नाइकेहरू यसैगरी सजिलै छुट्ने गरेका छन् । कुन्जोक लामा तिनैमध्येका एक हुन् । १५ वर्षदेखि कानुनी रूपमा फरार रहेका उनी नेता र उच्च प्रहरी अधिकारीकै संरक्षणमा थिए । गत १० असारमा बौद्धबाट पक्राउ परेका लामा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, मुद्दा चलाइएको कुन्जोक लामा आफू नभएको भनेर उनी छुट्ने प्रयासमा छन् । लामा भारतबाट बाघका छाला तथा हड्डी तिब्बती तस्करी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका नाइके भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनले करिब दुई अर्बको बैंकिङ कारोबारसमेत गरेका छन् ।
पाँच वर्षअघि बर्दियामा पक्राउ परेका बाघ तस्करी गिरोहका नाइके जसु बाबरिया पनि गत २३ वैशाखमा रिहा भएका छन् । पाटे बाघको चोरी सिकारी गर्ने समूहका नाइके उनी पाँच वर्षमै छुटेका हुन् । उनी २२ वैशाख ०७२ मा पक्राउ परेका थिए । बाँके र बर्दियाका जंगलमा पनि उनले बाघ मारेका थिए । यस्तो अपराधमा पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेमा अदालतले न्यूनतम सजाय मात्र सुनायो । बाबरिया भारतमा पनि मोस्ट वान्टेड छन् । उनी छुटेपछि फेरि बाघको चोरी सिकारीमा लाग्ने प्रहरीको चिन्ता छ ।
२८ माघ ०६८ मा कैलालीमा बाघको चोरी सिकारी र तस्करी गर्ने श्रवण बाबरियाको समूह पक्राउ परेको थियो । ४० वटा बाघको हड्डी तथा दुईवटा छालासहित पक्राउ परेका उनीहरूमध्ये पाँचजना एक–एक लाख धरौटीमा छुटे । लगत्तै भारत भागेको उनीहरू अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । पछि पुनरावेदन अदालतले उनीहरूलाई पाँच–पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो ।
पैसाकै बलमा सजिलै उम्किएका अर्का वन्जयन्तु तस्कर हुन् पेम्बा शेर्पा । २५ असार ०६१ मा उनी चितवनको आँपटारीमा गैँडाको पाँचवटा खागसहित पक्राउ परेका थिए । गम्भीर मुद्दाका अभियुक्त उनी त्यतिखेर सहजै एक लाख धरौटीमा छुटे । पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले उनलाई १५ वर्ष कैद सजाय सुनायो । त्यतिवेलासम्म उनी अमेरिका भागिसकेका थिए । अहिले पनि अमेरिकामै रहेका पेम्बाविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिसकेको छ । तर, नेपाल ल्याउन सकेको छैन ।
वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा संलग्न ठूला तस्करलाई सजाय दिलाउनै गाह्रो हुने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकारी बताउँछन् । सकेसम्म पक्राउ नै नपर्ने र पक्राउ परे पनि अदालतबाट प्रायः भरियालाई मात्र सजाय हुने, तर नाइकेहरू उम्कने गरेको उनले बताए ।
निकुञ्जमा घुँगी टिप्ने चेपाङ मारिए
Previous articleनिर्मला हत्याका दुई वर्ष, अझै उघ्रिएन पर्दा
Next articleछोरीको बलात्कारीलाई सजाय दिलाउँदा र मोहियानी हक माग्दा गयो त्रिभुवनको ज्यान